trainjourney Archives | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Iyada oo uu hadda dillaacay coronavirus (Covid-19) tuuraya qorshyaasha safarka qof kasta ee la jahawareersan, waxay noqon kartaa mid adag in la ogaado haddii ay tahay inaad dhawrtaan oo aad fasax lagu jiro coronavirus ama ma. While we can’t make that decision for you if you do choose to continue on it’s…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Socdaalku waa biimayntii ugu dambaysay laakiin waa inaad ku samaysaa shandado la'aan, gaar ahaan layovers ama haddii kaliya aad qabto maalin oo lacag la'aan ah in mid ka mid ah magaalooyinka caanka ah ee Germany. Waxaan kuu haynaa dhammaan macluumaadka aad ugu baahan tahay boorsooyinka bidix ee Jarmalka saddex ka mid ah…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Waxaa jira waxyaabo badan oo loo jacaylka ku saabsan Paris. Xaggee baad xitaa bilaabaan, xaq u? Waxa ugu horreeya ee ku soo dhaca maskaxdooda yahay goobaha weyn sida Tower Eiffel iyo Louvre ah. Laakiin sababta aan sidoo kale la ogaado dhagaxyo qarsoon ee magaalada? Aan ku bilownee…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Milan si Rome By tareenka ama Rome si Milan waa waayo-aragnimo fudud oo hufan. In aan ku xuso qurux badan! Waad qaadan kartaa tareen ka jaban kaasoo qaadan kara waqti ka dheer 3 saacadood laakiin in Tareenadu ka Milan si Rome kuu ogolaanayaa inaad ka boodaan off at…